ပန်ဒိုရာ: ဒီမြို့ထဲကို နောက်တခေါက်
နောက်တစ်ခေါက် ထပ်ဖတ်သွားပါတယ် မပန်ဒိုရာ။M.Yရဲ့comment နဲ့တွဲပြီးဖတ်လိုက်ရတော့ ကဗျာကို ပိုပြီးနားလည်သွားပါတယ်။
( I see you. )
ကဗျာ ရော မှတ်ချက်ပါ ဖတ်သွားပါတယ်။
ကဗျာရော မှတ်ချက်ပါ ဖတ်ကြည့်တယ်၊ အားလုံး ကောင်းပါတယ်၊ ကဗျာအသစ်တွေ မျှော်နေတယ်ဗျို့ ...း)
တယ် ဒီဆရာမ..ပစ်တောက်ပစ်တောက်နဲ့..(ဗစ်တောက် ဗစ်တောက်) ရေးတတ်တိုင်း..
အကြမ်းဖျင်းတော့ ဖတ်ပြီးသွားပါပြီ။ ပြန်ဖတ်ပါဦးမယ်။ ကိုမောင်ရင် ကွန်မန့်နဲ့ ပြန်တွဲဖတ်ရတာ ပိုစိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်။
မှန်တာပြောရရင် ကဗျာ ခက်ခက်တွေ မဖတ်ဖြစ်တာ ကြာပြီ။ ဒီ တပုဒ်ကိုတော့ တော်တော်ကို စိတ်ဝင်စားတာနဲ့ ဖတ်ဖြစ်တာ။
(စကားမစပ် - ကိုမောင်ရင် ဘလော့ဂ် ဖတ်လို့ မရတော့တာ စိတ်မကောင်းပါ။ အရင်တုန်းက ကျွန်တော် အမြဲဖတ်ဖြစ်တဲ့ ဘလော့ဂ်ပါ။)
ဟောင်း အာ u ။
ကျနော် ကဗျာမရေးဖြစ်တာ အဲသလို ကဗျာစုံးလေးတွေကြောင့်ပေါ့ဗျာ။ M.Y ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်။ အခုတလော နှင်းခါးမိုး ရဲ့ကဗျာ ။ခင်ဗျားရဲ့ကဗျာ ကျနော်တော်တော်ရေငတ်ပြေတယ်။ ကျနော်က အခုရက်အတွင်း ရာစုနှစ်တဝက်အတွင်း မြန်မာကဗျာနာကျင်မှု ဆိုတဲ့ စာတမ်းငယ်လေးတခုရေးနေတုန်း ခင်ဗျားကဗျာဖတ်ရတော့ တကယ့်ကို ရေးလို့ အားရှိသွားရတယ်။ အေးဗျာ ကဗျာရေးရင် ဝေးရာက နီးလာကြတယ်လို့ ဆိုတယ်မို့ လား။
ဒီကဗျာကို ကျနော်ကြိုက်တယ်။ M.Y နဲ့ မတူတဲ့ Mood ကိုလည်းကျနော်ရလိုက်တယ်။ ဒါပေါ့ ဘယ်သူဖတ်ဖတ်မတူတဲ့ Mood ကိုရမှ ကဗျာမြောက်မှာပေါ့နော်။
ဒေါ်ပန်လေး ခင်ဗျားကတော့ ကျနော်တို့ ရပ်ကွက်ထဲက ကဗျာလော်ပန်လေးပါပဲဗျား။
ဒေါ်ပန်လေး ဟောင်းR U.
ကျနော်ပထမ ကွန်မန့် က ဘာဖြစ်လို့ လည်းမသိဘူးပျောက်သွားတယ်ဗျ။ ဒါထပ်ရေးတာပါ။
ကျနော် ဒီကဗျာကို ကြိုက်တယ်။ နောက်တခါ လာပြီးဖတ်ရပါလိမ့်ဦးမယ်။
အမှား. အမှန် ရိုးသားခြင်း မရိုးသားခြင်း တွေးပြီးခံစားရ တွေ နှစ်သက်မိပါတယ်၊
ဖတ်တုန်းတော့ခပ်ဝါးဝါးဘဲ...ကိုမောင်ရင် ကော်မန့်ဖတ်မှ နဲနဲ အိုကေတယ်ဆိုမလားဘဲ...။ စကားမစပ် ကိုမောင်ရင်ကို မြင်တော့အတော်ဝမ်းသာ
မိသား... ကိုမောင်ရင် ( ဗိုလ်အောင်ဒင် ) ဘယ်တော့ ပြန်လာမတုန်း???????
ကဗျာတွေကို footnotes တွေ မပါဘဲ ဖတ်လို့ရတဲ့ဘ၀ ရောက်ချင်တယ်လို့ ကဗျာဆရာမင်းသစ်လား မသိ ပြောခဲ့တာ သတိရတယ်။ အခုကဗျာကတော့ ကိုမောင်ရင် မှတ်ချက်နဲ့မို့ ပိုပြည့်စုံသွားသလိုပဲ။
တို့ကတော့ ကဗျာစပ်ဖြစ်တဲ့ အချိန်ကာလကို နောက်ခံပိတ်ကားအနေနဲ့ ခံစားနေမိတာပါ။ အုတ်နီခဲရောင်ရင့်ရင့် တွေ ရွှေရောင်တောက်သွားတဲ့ ကာလတွေကိုပေါ့။
ဟေ့ကောင် ဟေ့ကောင် ဆိုတဲ့ အပုဒ်က ရင်ကို အထိဆုံးပါ။ မင်း..ကွာ.. ဆိုတော့ ငိုချင်သွားတာပဲ။